Tartan adag oo loogu jiro abaalmarinta laacibka ugu fiican koobka aduunka… – Hagaag.com
Tartan adag oo loogu jiro abaalmarinta laacibka ugu fiican koobka aduunka…
48 saacadood ka hor dhamaadka tartanka kubadda cagta koobka adduunka ee Russia, Waxaa muuqata khilaaf xoog badan oo in ka badan xiddig oo loo wado inuu qaado abaalmarinta laacibka ugu fiican tartankan hadda socda.
Inkastoo Argentina ay guuldarro kala kulantay Germany finalkii Brazil 2014, haddana kama aysan horjoogsan Lionel Messi inuu ku guuleysto abaalmarinta ciyaaryahanka ugu fiican.
Abaalmarinta nuqulkeedii (South Africa 2010) ayaa ku guuleystay Diego Forlan oo kooxdiisii Uruguay gashay kaalinta afraad.
Sidoo kale abaalmarinta ayaa qaaday Romario oo u dhashay dalka Brazil oo ahaa kii ugu dambeeyey oo isku wada darsada koobka adduunka iyo abaalmarinta nuqulkii lagu qabtay Mareykanka (1994). Waxaa kaloo jira 10 ciyaartoy oo kaliya oo isku darsaday abaalmarinta iyo koobka adduunka.
Kooxaha Farsamada ee daraaseeya hanaanka ciyaaraha ee FIFA ayaa dooran doona abaalmarinta cida ku guuleysan doonta, kadib ciyaarta ugu dambeysa ee Croatia iyo France oo dhici doonta maalinta Axada ee soo socota magaalada Moscow.
Iyada oo ay macsalaameeyeen tiro badan oo ah xiddigaha safka hore sida xiddiga Portugal ee Cristiano Ronaldo, Messi iyo Neymar, fursad ayaa waxay hadda dhex taalaa xiddigo cusub in ay qaadaan abaalmarinta Golden Ball ee ciyaaryahanka ugu fiican koobka adduunka.
Waxaa si cad loo saadaalinayaa xiddiga Croatia Luka Modric (32 sano), waxaa sidoo kale aan ka marneyn liiska dadka loo saadaalinayo xiddiga da’da yar ee France Kylian Mbappe, waxaa sidoo kale la saadaalinayaa xiddiga England Harry Keane oo Mondialka lix gool dhaliyey, inkastoo rajada kooxda Ingiriiska dhamaatay, waxaa kaloo khadka ku jira xiddiga Belgium Eden Hazard wacdarihii uu ka dhigay koobka adduunka.
Waxaa la qorsheeyey in la bixiyo dhowr abaalmarinno oo kale gedisan, kabta dahabiga qof ugu goolasha badan, gacan gashiga dahabiga ee goolhayaha ugu fiican iyo kooxda ugu ciyaar nadiifsan ee anshaxa tartanka ee lagu qabtay dalka Ruushka laga soo bilaabo 14 June ilaa 15 July ee soo socota.